OK Mg Mg, this known Syaitan Wira Thu is better than the unknown powerful Iblis affiliated to military leaders behind the scene | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« *** ဦးတိုက်၍ ဖူးလိုက်ချင်သည် ***
Qur’ans torn by Buddhist terrorists in Myanmar »
This entry was posted on May 10, 2013 at 9:10 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “OK Mg Mg, this known Syaitan Wira Thu is better than the unknown powerful Iblis affiliated to military leaders behind the scene”
May 10, 2013 at 10:14 am | Reply
Bo Tin Hla shared Cpmc Mandalay’s photo.
ပဋိပက္ခဖန်တီးမှုများကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ တဲ့ လုပ်ပြန်ပြီ။
၀ီရသူရယ်. မင်းက အဖမ်းခံရမှာကြောက်လို့လို့ ပဲထင်တယ်။ ယောက်ျားကောဟုတ်ရဲ့လား။ လုပ်ရင် အဆုံးထိလုပ်လေ.အခုတော့ ဟိုပင်ဒီပင်ကူးပါလို့ မျောက်ကြီးဖင်ခေါင်းကျယ် ဖြစ်နေပြီ။
May 10, 2013 at 10:32 am | Reply
ဒီနေ့မန်းလေးမှာနေ့လည် ၃း၃၀ နဲ့ ၄း၀၀ ကြားမှာမိုးများရွာပြီးမိုးကြိုးများတအားပစ်တယ်လို့သူငယ်ချင်းကဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ် ဒါနဲ့စကားပြောနေ ရင်းသူပြောပြတာလေးကဒီနေ့ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကဦးဝီရသူကို ဈေးချို Cရုံ မှာရှိတဲ့ ဦးကျော်အေး-ဒေါ်ပု ဇာခြင် ထောင် ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင် မှာတရားဟောဖို့ဖိတ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်သွားတော့ တရားပွဲလဲပျက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်
သူပြောပြတာက ဦဝီရသူဟာ မိုးကြိုးတအားပစ် တအားချိန်လာတော့တော်တော်လေးကြောက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်ကို့ပြောတယ်ဗျ
အဲ့တာပဲဗျ ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးက ဒီလို့မိုးကြိုးပစ် မိုးချိန်းရင် မဟုတ်မမုန်တာလုပ်ထားတဲ့လူတွေက တော်တော်ကြောက်ကတယ်လို့ငယ်ငယ်လေးကတဲ့ကြားဖူးနေကြမှာပါအားလုံးလဲ
အဲ့တော့မန်းလေးသာတွေအ နေနဲ့မိုးအုံပြီးမိုးရွာမယ်ထင် ရင် ဦးဝီရသူကိုအပြင် မထွက်မိအောင် သတိပေးပေါ့ဗျာ မိုးကြိုးပစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်အပစ်ကြီးရှိတဲ့လူကိုမှပစ်တယ်လို့တောကြားဖူးတာပဲ
ရှေ့ရှောက်သတိတာထားနေ ပေါ့ ဝီရသူရယ်